Ukongezelela ngokubuza imibuzo ngamaxesha kuyazenzekela yaye kwiimeko ezininzi zendalo, iteknoloji entsha likuvumela ukuba utshintshe uhlobo imibuzo. mibuzo phando zi zivaliwe, apho abaphenduli ukukhetha ezibhalwe abaphandi indawo ukhetho iseti. Yinto inkqubo ukuba uphando abadumileyo iminxeba umphandi Ngokomzekelo, nantsi umbuzo uphando evaliweyo "ukubeka amazwi emlonyeni zabantu.":
"Lo mbuzo elilandelayo ngalo mbandela yomsebenzi. Ngaba nceda ujonge eli khadi khawundixelele into kolu luhlu apho ubuya abaninzi bakhetha kwi umsebenzi? "
Akukho sisengozini ndingatshiseki
iiyure zokusebenza ezimfutshane, ezininzi nexesha;
Umsebenzi kubalulekile, kwaye anike imvakalelo wemfezeko.
Ngoku nantsi umbuzo efanayo wambuza ngohlobo evulekileyo:
Nangona le mibuzo mibini kubonakala ezifanayo kakhulu, kwelinge uphando ngokuthi Howard Schuman and Stanley Presser (1979) lubonisa ukuba bakwazi ukuvelisa iziphumo ezahlukeneyo kunene: phantse ama-60% iziphumo open kuwa ngaphandle amacandelo iimpendulo ezivaliweyo (Figure 3.7).
Isazobe 3.7: Iziphumo ukusuka Schuman and Presser (1979) . Iimpendulo zahluke ngokuxhomekeke ekubeni umbuzo ecelwa ekwimo evaliweyo okanye ezivulekileyo.
Nangona imibuzo evulekileyo evaliweyo unako ukuvelisa ulwazi zahlukene kwaye bobabini ezithandwayo ngemihla ekuqaleni uphando uphando esivaliweyo imibuzo baye ukongamela entsimini. Le ngabanegunya akungenxa imibuzo evalekileyo ekungqiniweyo ukuba ukunika imilinganiselo ngcono, kunokuba ke kuba kulula kakhulu ukuba ukusebenzisa; inkqubo lweekhowudi imibuzo open-ophele zinzima kwaye kuyabiza. Uhambisa kude imibuzo evulekileyo Lilishwa ke elo kuba loo nto kanye inkcazelo ukuba umphandi wayengazi phambili ukuba ngowona ezibalulekileyo.
Xa uphando ndenze kunye Karen Levy, sazama ukwenza uhlobo olutsha umbuzo uphando ohlanganisa imisebenzi engcono omabini imibuzo vula iphinde ivalwe (Salganik and Levy 2015) . Oko kukuthi, lwenza abaphandi ukuba bafunde ulwazi olutsha njengoko umbuzo evulekileyo, kwaye ivelisa lula ukuhlalutya idatha umbuzo evaliweyo. Ngokuvuselelwa iinkqubo online iqhutywa umxholo umsebenzisi-generated, apho Wikipedia yinto engumzekelo, sasizibiza inkqubo yethu uphando wiki. Xa Ngokudibanisa iimpawu Wikipedia kunye uphando yemveli, sinethemba ukwenza indlela entsha zokubuza imibuzo.
Inkqubo nokuqokelelwa kwedatha kwi uphando wiki luzekeliswa iprojekthi senza ofisi New York City KasoDolophu ukuze kumanywe iingcinga abahlali 'ukuya PlaNYC 2030, isicwangciso uzinzo siphela New York. Ukuqalisa le nkqubo, kwiOfisi Sodolophu eveliswe uluhlu izimvo 25 esekelwe eluntwini zabo zangaphambili (umzekelo, "Funa zonke izakhiwo ezinkulu ukwenza uphuculo ezithile ukusebenza kwamandla," "Fundisa abantwana malunga nemiba eluhlaza njengenxalenye yekharityhulam yesikolo"). Ukusebenzisa ezi zimvo 25 "imbewu," Ofisi kaSodolophu wabuza lo mbuzo: "Zeziphi ezininzi ocinga ukuba asiyongcamango ilungileyo ngokudala, iSixeko aluhlaza omkhulu New York?" Abamangalelwa yabonelelwa ngesikere ngezimvo (umzekelo, "yezikolo Vula kulo lonke umzi njengoko kumabala yoluntu 'kunye' Ukwandisa ekujoliswe zokutyala umthi kubumelwane banamazinga aphezulu sesifuba "), wacela ukuba ukhethe phakathi kwabo (Figure 3.8). Emva kokukhetha, abaphenduli zanikezelwa nangoko nesinye isibini nakanjanina ekhethiweyo ngezimvo. Ibe nakho ukuqhuba nokuhlawula ulwazi malunga ukuzikhethela lwabo kangangoko nje kwabo nokuba kuvota okanye ngokukhetha "Andikwazi isigqibo." Ngokubalulekileyo, nangaliphi na ixesha, abamangalelwa baye bakwazi ukuba negalelo ngezimvo zabo, nto leyo-de zivunywe kasodolophu Office-yaba yinxalenye echibini ngezimvo ukuba thaca kwabanye. Ngoko ke, imibuzo nxaxheba andamkeli zombini vula iphinde ivalwe ngaxeshanye.
Isazobe 3.8: Interface ungasisishwankathelo wiki (Salganik and Levy 2015) .
Office Sodolophu liqalise uphando yayo wiki ngo-Oktobha 2010 kunye uthotho yeentlanganiso zoluntu ukufumana ingxelo umhlali. Kwiinyanga ezine, 1.436 abaphenduli banikela iimpendulo 31.893 neengcinga ezintsha 464. Okubalulekileyo, 8 phezulu iingcamango amanqaku 10 kufakwe nxaxheba kunokuba yinxalenye iseti ngezimvo imbewu Office Sodolophu. Ke, njengoko sichaza kwiphepha lethu, oku umzekelo iimvavanyo ezininzi wiki. Ngamanye amazwi, xa azifihli ulwazi olutsha, abaphandi bayakwazi ukufunda izinto babeya ophosakeleyo ngokusebenzisa evaliweyo ngakumbi ngokubuza.